संसदमा मन्त्री र सांसदको सवालजवाफ | नेपाली पब्लिक संसदमा मन्त्री र सांसदको सवालजवाफ | नेपाली पब्लिक
संसदमा मन्त्री र सांसदको सवालजवाफ
नेपाली पब्लिक २०७६, १० असार मंगलवार ०६:४६
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक ०७६ माथि सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नको ६ जना मन्त्रीले सोमबार जवाफ दिएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा आफू नेतृत्वको मातहतमा विनियोजित योजनामाथि सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिए । ६ जना मन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तरसमेत भयो ।
डा. डिला संग्रौला: सर्लाहीमा कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारेको भन्ने आशंका गर्ने प्रमाणहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्, यसमा भनाइ के छ ? नेपालको एयरपोर्टबाट आउने सुन रोक्न नसक्ने सरकारले बाहिरबाट आउन सक्ने अवैध धन्दालाई कसरी रोक्न सक्छ ?
मन्त्री थापाः सर्लाही घटनाको बारेमा सरकारले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । (गत सोमबार बिहान राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री थापाले कुमार पौडेल प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएको बताएका थिए ) त्यो घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले सुरुवात गरिसकेको छ । सुन तस्करीहरूलाई मूलतः उनीहरूको सञ्जाल तोडिएको छ । एयरपोर्टबाट निर्वाध रूपमा सुन आएको छैन।
प्रमिला राई: गुणस्तरीय शिक्षालगायतको सरकारको नीति पूरा कसरी हुन्छ  ?
मन्त्री पोखरेल: २१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको शिक्षामा योगदान छ । ७९ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमै निर्भरताको अवस्था छ । एक दशकभित्र हाम्रा अभिभावक र विद्यार्थीको छनोट सामुदायिक विद्यालय बनाउने गरी हामी अघि बढिरहेका छौँ ।
हामीले मात्रै चाहेर सार्क शिखरको सम्मेलन गर्ने अवस्थामा छैनौँ
डा. डिला संग्रौला: भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विमस्टेकलाई महत्व दिने स्पष्ट संकेत दिइसकेका छन् । सार्कको अध्यक्ष नेपालले सार्क बैठकबारे ठोस पहल गर्न सकेको छैन । चीनले बीआरआईमा ठोस प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरे पनि लैजान सकेको छैन, किन ?
मन्त्री ज्ञवाली: हामीले बनाएका बहुपक्षीय प्रणालीमा चुनौती खडा भइरहेको छ । यो नेपालका लागि मात्रै होइन, सबैका निम्ती चुनौती छ । त्यही भएर नेपालले स्वतन्त्र, असंलग्न, तटस्थ र मित्रतामा आधारित सम्बन्धलाई जोड दिएको हो । सार्क र बिमस्टेक दुवै हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । हामीले मात्रै चाहेर सार्क शिखरको सम्मेलन गर्ने अवस्था छैन, तर पनि हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ ।
दिव्यमणि राजभण्डारी: आर्थिक कूटनीतिका लागि हामीले के गर्दै छौँ रु व्यवस्थित तरिकाले कूटनीतिक नियोग कसरी चलाउने रु
मन्त्री ज्ञवाली: आर्थिक कूटनीतिका लागि हाम्रा भइरहेको संयन्त्र, साधन–स्रोत पर्याप्त भएन कि भन्ने कुरामा आंशिक सत्यता छ । तर, यो पनि एउटा सापेक्षित कुरा हो ।
डा. डिला संग्रौला पन्त: वैदेशिक रोजगारको मुख्य गन्तव्यस्थल मलेसिया किन बन्द भयो ? नेपाल र जापानबिच श्रम सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन किन भएन ? खालि कागजमा सम्झौता गर्दैमा श्रमिकहरू विदेश जान सक्छन् ?
मन्त्री विष्ट: मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्थाको छनोट प्रक्रिया केही दिनभित्र टुंगिनेछ । एक महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारको प्राविधिक समूहको बैठक बस्ने समझदारी भएको छ । जापानले नौवटा देशसँग श्रमिक लिने गरी टुंगो लगाएको थियो । हालसम्म पाँचवटा देशमा मात्रै सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो देश नेपाल हो ।
पुष्पा भुसाल गौतम: जलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि अर्बौँ खर्च भएको भन्नुभयो । मुलुकको आवश्यकता त्यो हो रु वर्षाका वेला एकजना बालिका ढलभित्र पसेर बल्ल–बल्ल ज्यान बचाएको गत वर्ष देखिएको थियो ।
मन्त्री महासेठ: आजको समयमा पानीजहाजको आवश्यकता छ कि छैन रु बजेट हामीले अहिले जति छुट्याए पनि आवश्यकतानुसार मन्त्रालयले छुट्याउनेछ । सरकारले पानीजहाजको कार्यालय स्थापना गरेर कोसी, गण्डकीमा सर्भे गर्न नेपाली र भारतीय प्राविधिक टिमबीच मिटिङ भएको छ । प्राथमिकतामै राखेर सरकारले यो कामलाई अगाडि बढाउनेछ ।
राधा ज्ञवाली: ०७२ मै अघि बढिसकेको बुढीगण्डकीलाई अहिलेको बजेटलाई १३ अर्ब ५५ करोड मुआब्जाका लागि छुट्याएको होला, निर्माणका लागि बजेट देखिएन । सरकारले पेट्रोलियमको प्रत्येक लिटरमा पाँच रुपैयाँ संकलित गरेर राखेको थियो, अहिले के कति जम्मा भयो ?
मन्त्री पुन: बुढीगण्डकी गेजुवा कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुवा कम्पनीसँग छलफल गर्न भनेको छ । पाँच महिनाअघि तीन चरणमा छलफल गयौँ । त्यसपछि अगाडि बढेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय हितमा काम गर्छौँ । यो समाचार नयाँ पत्रिकामा छ।
निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाइ छोड्छौंः…
इँटा उद्योगमा दश करोडको क्षति
गाउँघरमा चिकित्सक कार्यक्रम’ प्रभावकारी
एडिबीको सहुलियत ऋण सहयोगमा भीमदत्तमा…